မကွေး တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်းဒေသြ?? - Yangon Media Group
မကွေး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၉
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့နယ်မြေအတွင်းရှိ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ နေ့စဉ်လှည့်ကင်း၊ ရပ်ကင်း၊ လုံခြုံရေးနှင့် မှုခင်းများမဖြစ်ပွားစေရေး အကြမ်းဖက်မှုများ ကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ဆိုင်ကယ် ၁၃၂ စီး ပေးအပ်ပွဲကို ဖေဖော်ဝါ ရီ ၉ရက် နံနက်ပိုင်းက မကွေးတိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”ကျွန်တော်တို့ တိုင်းဒေသကြီးမှာ ခရိုင်ငါးခရိုင်နဲ့ မြို့နယ် ၂၅မြို့ နယ်ရှိတယ်။ စခန်းတွေကတော့ ၄၂ စခန်းရှိတဲ့အတွက် အခုရရှိတဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြို့ နယ်တစ်မြို့နယ် လေးစီးနှုန်းနဲ့ ထောက်ပံ့တယ်။ ခရိုင်ရုံးစိုက်တဲ့ မြို့နယ်တွေကျ ငါးစီးပေးပါတယ်၊ အခုလို အစိုးရအဖွဲ့က ထောက်ပံ့ ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်း လှည့်ကင်း၊ ရပ်ကင်း၊ ဝပ်ကင်းများဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ ပိုမိုပြီးအဆင်ပြေ ချောမွေ့နိုင်ရန်အတွက်ခွဲဝေပြီး တာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ မှူးရုံး ဦးစီးအရာရှိ(ပထမတန်း) ဒုတိယရဲမှူးကြီး တင်မိုးက ပြောသည်။
အခမ်းအနားတွင် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုမှ ဒါရမ်း- ၁၂၅ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၁၃၂ စီးအား တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီးခင်မောင်အေးထံ ပေး အပ်ခြင်း၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ် ရေးရာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းဦးမှ ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ် ၁၃၂ လုံးအား တိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး လှသန်းထံ ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရဲမှူးကြီး ခင်မောင် အေးမှ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် ရဲအကူတပ်ဖွဲ့ခွဲနှင့် ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးများထံသို့ ဆိုင်ကယ်နှင့်ဆိုင်ကယ်စီး ဦးထုပ်များ ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
မူဆယ်ဈေး အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ဈေးသွားဈေးလာများကို လက်လုပ် ပုဆိန်ဖြင့် အန္တရာယ်ပြုသူ တစ်ကိုယ
တောင်ကိုရီးယားမှာ ဒုတိယ လူကြည့်အများဆုံး ဖြစ်လာတဲ့ 'Along With the Gods' ရုပ်ရှင်
ဒဏ်ရာကြောင့် အာဂျင်တီးနားနှင့် အတူ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲ ကစားခွင့်ကို ရိုမီယို ဆုံးရှုံး
သင်္ကြန်ကာလအပြီး ချင်းတွင်း အထက်ပိုင်းသို့ ပြေးဆွဲသည့် လိုင်းရေယာဉ်များ ခရီးသည် အရနည်း၍ အရှု??
စိုးရိမ်ကြောင့်ကြရမှုကို ကခုန်ခြင်းနဲ့ တိုက်ဖျက်တဲ့ အဆိုတော် ဆမ်စမစ်
ဗင်နီဇွဲလား သမ္မတ မာဒူရို အတိုက်အခံများကို နှိမ်နင်းမည့် ဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းရန် ဆောင်ရွက်နေဟု အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ဂွါအီဒိုက ပြောဆို
အောင်လံမြို့နယ်ထွက် ပြောင်းဖူးများ ရန်ကုန်ဈေးကွက်၌ ဈေးကျနေသဖြင့် မင်းဘူးဈေးကွက်သို့တင်ပ??
﻿ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိလာနိုင်သည့် ကြက်နှင့်ငါး တွဲဖက်မွေးမြူရေးစနစ်ကို ဖျက်သိမ်းရ??